Catzz Fandriana Saka - Famolavolana
Fandriana Saka Rehefa namorona fandriana saka Catzz, ny aingam-panahy dia nalaina avy amin'ny filan'ny saka sy ny tompona, ary mila manambatra ny fiasa, ny fahatsorana ary ny hatsarana. Mandritra ny fandinihana saka, ny endrika mampiavaka azy ireo amin'ny lafiny geometrika dia nanentana ny endrika madio sy azo fantarina. Ny fomba fitondran-tena sasany (ohatra ny fivezivezena amin'ny sofina) dia nanjary niditra tamin'ny zava-niainan'ny saka. Ary koa, ao an-tsaina ny tompony, ny tanjona dia ny hamorona fanaka azon'izy ireo ampanjifaina sy aseho am-pireharehana. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny fiantohana ny fikolokoloana mora. Izy rehetra dia mamela ny endriny marevaka, geometrika ary ny endrika modular.
Anaran'ny tetikasa : Catzz, Anaran'ny mpamorona : Mirko Vujicic, Anaran'ny mpanjifa : Mirko Vujicic.
Famatsiana biby sy ny vokatra ho an'ny famolavolana biby
Fandriana Saka Mirko Vujicic Catzz